Nin waday gaari ayaa dilay dad ku socday dhabo loogu talagalay baaskiillada, waxaana weerarka lagu tilmaamay mid argagixiso.
Wax ka badan 50 qof ayaa ku dhimatay magaalada Las Vegas kadib markii nin hubeysan uu weerar ku qaaday meel ay ka socotay xaflad
Sawirro: Quruxda qarsoon ee qeybo ka mid ah Soomaaliya
Soomaaliya shalay waxaa laga maamuusay maalinta dalxiiska adduunka. Balse dalka wuxuu leeyahay dhul badan oo qurux badan oo loo dalxiistagi karo, inkastoo meelaha qaar ay amni xumo ka jirto. Qeybo ka mid ah sawirrada Soomaaliya ee quruxda badan ayaan halkan ku soo bandhigeysaa.
Tartan loogu talogalay in lagu xuso kala duwanaanta iyo nolosha shimbiraha ayaa waxaa abaalmarinta koowaad heley sawir laga qaaday balanboolo
Sawirro : Tartan markii ugu horeysey noociisa oo kale lagu qabto Muqdisho
Tartanka Legdenka ayaa loogu talogalay in lagu muujiyo xasiloonida ka jirta caasimadda
Sawirro: Caasimadda Eritrea oo lagu daray diwaanka goobaha qaddiimiga ah
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhaqanka ee UNESCO ayaa Asmara ku dartay diwaanka goobaha astaanta u ah aathaartii hore ee dhaxalka aadanaha ee dunida. Waxaa magaalada wali ku yaalla dhismayaal qaddiimi ah oo uu dhisay Taliyaaniga intii uu gumeysanayay dalkaasi (1889-1941).
10 Luulyo 2017
Kacaa-kufka ‘Faalaloowga’ Netenyahu
Madaxweyne Ramaphosa ma mideeyn doona xisbiga kala qeybsamay ee ANC?
Faallo: Geerida hogaamiyihii mucaaradka Zimbabwe
Madaxweyne Farmaajo oo wareysi gaar ah siiyay BBC